Fironana in Contemporary Art: inona
mpanao hosodoko - Oleg Solovyov
mpanao hosodoko -
atao in 1998
Ahoana no mifidy ny sary ny anatiny
Hoso-doko ao amin'ny afovoan-trano
tena » vaovao » Fironana in Contemporary Art
Fironana in Contemporary Art
Ankehitriny zavakanto sy ny zavakanto tsena dia fanitarana azy isan'andro. Mazava ho azy, ny teknolojia vaovao nanome tosika ny hihaona fironana vaovao sy ny mpanakanto. Tsy voatery mba hitsidika fampirantiana sy ny tranom-bakoka, manaraka ny famoahana ny vaovao lahatahiry: ampy ny mifandray amin'ny aterineto - sy izao tontolo izao ny kanto avy fahiny ho an'ny andro ankehitriny miseho eo imason'ny. Aoka ny hiatrika fotoana izao fironana amin'ny zavakanto maoderina.
Ity lahatsoratra ity mandinika ny fironana lehibe indrindra ao amin'ny sary izao tontolo izao, fombafomba sy ny fametrahana.
Very fomba fijery mahaliana sary eto amin'izao tontolo izao ny sary famolavolana. Hanatontosana izany dia amin'ny nanova sary, antsoina hoe vokatry Gluck, indrindra fa ao amin'ny tontolo dizitaly - malaza fironana amin'ny mpanakanto. Taloha, toy izany curvature, deformation mampino manelingelina. Na izany aza, dia vao mainka zavakanto maoderina vitsivitsy dingana ambony: ny, Inona no nampiasaina mba hanambady, Ary mamorona manokana. 2018 taona – tena fotoana, raha sary amin'ny glitch vokany naka manerana izao tontolo izao.
Ny fifehezan 'ny boky
Ary koa, ny endriky ny sary sokitra, fa sarotra ny am-polo taona lasa izay sary an-tsaina. Miaraka amin'ny fampandrosoana ny endrika elektronika, taratasy dika, indrisy, Izany dia mandalo vanim-potoana tsara indrindra ny. na izany aza, Artists mahita izao tontolo izao amin'ny maso isan-karazany, ary avy eo, fa ny foto-kevitra tsotra izao ny hafa, ho azy ireo dia zavatra mba hamorona sangan'asa. Izany antontam-boky lasa ny fanorenana fitaovana, izay no teraka ny mahatalanjona tarehimarika, structure. Ny endrika sy ny mety afa-po, na mifameno, na amin'ny ady, niteraka fanehoan-kevitra samihafa avy amin'ny mpijery.
Misy mpanakanto kokoa ny motifs ny zavamaniry sy ny biby, Rachel oh Asha (Rachael Ashe), hafa, toy ny Anouk Kruitof (Anouk Kruithof) Tsy namorona ny sary sokitra korontam rindrina. Fa ny olona mamorona ny tena endriky ny taratasy boky, malagasy, tahirim-pampianaran'ny lasa hihevitra. Teny an-tanany, ny mpanatrika hahita ny boky amin'ny hafa tanteraka zoro, fa tsy latsa-danja tsara tarehy.
Sary sokitra amin'ny endrika Lego
Dia azo heverina, fa ny mpamorona ireo hira na hafahafa fotsiny dia tsy mitombo ao amin'ny fanahy, na tsotra izao tsy nilalao ampy. Na izany aza, ny mpanakanto mamorona sarivongana tsy mazava, Simple sambo piraty na ny lapa, ary tsy mampino ambaratonga sy amin'ny teny, ankizy tsy tanteraka ny zavatra Applied kanto.
Efa ho dimampolo taona lasa izay, ny malaza mpamorona no noforonina, ary misy ny olona vitsy eto amin'izao tontolo izao, izay niezaka ny hanao na inona na inona avy amin'ny detalek. Saingy ho an'ny mpanakanto, na dia misy dikany toy izany Raha vao jerena, ara-nofo lasa hanitsaka vato ho tari-dalana vaovao eto amin'izao tontolo izao ny vanim-potoana kanto. Ny iray amin'ireo malaza indrindra eran-tany toy izany mampino mpamorona hira - Baiboly neo-sokitra Nathan Sawaya. Ireto ny sasany amin'ny asany: Fandikana ny Edvard Munch ny "The nikiakiaka", ny dika mitovy ny Parthenon sy, Farany, efa-metatra ny taolana Tyrannosaurus Rex.
Textile sy ny tady fametrahana
Inona no manao ny, dia mety toa, Tady na kofehy mahazatra? Artists tonga izany zavatra mahazatra tokantrano amin'ny lafiny mahazatra. Tsy manjaitra na embroider, sy Miahy.
Ohatra,, Anarana Chiharu Shiota manova kofehy manodidina ny efitrano zavatra isan-karazany. Ny sasany mpijery mankafy ny asa, ny hafa mihevitra azy ireo ho maizina sy mahatahotra. na izany aza, Tsy foana tsy miraharaha. Gabriel Meksikana Dave mahafinaritra mamorona goavana fametrahana ny avana yarns. Ny asany ny mpanoratra miezaka ny misaintsaina ny olona mila fiarovana sy fialofana. Scott Hove ny filaments, tady, bechevok, weaves ny tranonkala ny tady. Fa Emil Lukas, Amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana toy izany tsy mahazatra, mitaona sary. Fa swathes ny kofehy miloko hazo board, famoronana lamina iray saro-takarina mahatalanjona.
Voalaza vitsy monja mpanakanto. Ao anatin'ny tontolo maro mpanoratra, izay miteraka mahavariana amin'ny fametrahana originality, misaintsaina isan-karazany ny lohahevitra, dia hanendry.
Author tany am-boalohany
An mahaliana fironana, izay mamela anao mba hividy ny sangan'asa tsy vitan'ny hoe bola, sy ny zavakanto hetra. Vanim-potoana kopipasta mamela ny vaovao jereo kely ny hevitra ny fanamboarana ny asa ny zavakanto amin'ny fomba maro samy hafa sy amin'ny vidiny samihafa sokajy.
Ahoana ary no izy. Ny sary dia pirinty amin'ny voafetra ny fanontana, na amin'ny taratasy, na amin'ny lamba. Araka izany, samy handika ny am-boalohany, izay voamarina.
Interactive zavakanto an-dalambe
Type ny zavakanto an-dalambe isan-karazany sy ny zavatra maro dia: Ny mpanoratra dia niezaka ny tsy manolotra fotsiny ny asany, fa ny fikasana koa anjara ny mpanatrika ny lalao. Street zavakanto ankehitriny Tsy mahagaga - ny sasany mahita izany ho fandrobàna, ary ny sasany dia mihevitra sy nifanakalo hevitra tiako indrindra ny asa. Very maro fanta-daza ao amin'ny tontolon'ny zavakanto mpanakanto hizahanao toetra ny tànany amin'ny toy izany tany am-boalohany Genre, fa tsy fantatra anarana.
Ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny sary ireo - izany no hevitra, ny mpanoratra dia miezaka ny mampita ny mpanatrika.
mahatalanjona tontolo, mpanakanto izay mamorona, tena mahakasika zavatra na zavatra velona, ary koa ny famoronana ny olona kely. Lohahevitra Mirkov mampino isan-karazany: mirazotra zava-misy, mbola kely na ny olon-tsotra eo amin'ny fiainana fotoana. Vinety dia nidera noho ny fametrahana mazava tsara. Indrindra rehefa ilay tompony amin'ny mahatalanjona Fantasy mitondra ny zava-misy eo amin'ny fiainana ao amin'ny toerana kely.
Misy olon-tsotra mpanoratra pistachio niova fo ho ao an-Martian fototra, hafa boaty feno zavamaniry, fasika sy ny olona, raha ny fahatelo siny hoditra Fanta ho an'ny olona - dia fototra ho an'ny famenoana vinogradinok.
Contemporary kanto dia nifindra tany an-dafin'i zavakanto foibe sy oniversite, dia tena tsy mitovy amin'ny, izay nanapa-kevitra ny haneho amin'ny tranombakoka. Ary izany rehetra izany dia lehibe, satria tsy ilaina ny mamorona faritra, ary ny saina no tsy manam-petra. Noho izany, any aoriana tokony manantena ny hahita na dia tsy mahazatra kokoa fironana, noho izay mpanoratra ny asa am-boalohany dia ho faly ny mpanatrika.
Sale ny sary hoso-doko ao amin'ny Saint-Pétersbourg, sary mba hanafatra, painting anatiny.
Vidin'ny diloilo hosodoko amin'ny lamba. Ny saran'ny sary, sary, ranomainty, gouache, taratasy, Pop kanto, Avant tena manavao, maoderina kanto, mpanao hosodoko.
vidiny: avy amin'ny 15 000t. fotoana: avy amin'ny 2 andro
Ohatra ny asa: hoso-doko | picture | portfolio-